Ogaden News Agency (ONA) – Wargeyska Ottowa Citizen/Canada – Bashiir Makhtal Canada Miyay Ilowday!
Wargeyska Ottowa Citizen/Canada – Bashiir Makhtal Canada Miyay Ilowday!
Wargeyska Ottowa Citizen oo kasoo baxa wadanka Canada ayaa taarikh kooban ka bixiyay Xabsiga Bashiir makhtal oo maanta oo ah Jimce taariikhda 20/01/2012 ay u buuxsantay 5 sanno oo uu ku jiro xabsiga Gumeysiga Ethiopia si sharcidarro ah. Bashiir Makhtal ayaa lagu xukumay xabsi daayimi ah iyada oo gumeysiga Ethiopia ay ku eedeeyeen innu ka tirsanyahay ururka xoriyad doonka Ogadeniya. Mudadii lasoo xidhay waxay taliska Ethiopia u diideen muddo sanad ah in Safarada Canada ay la kulanto Bashiir Makhtal si ay u siiso kaalmo ugana caawiso dhanka sharciga, bashiir ayaa heysta dhalasho Canadian ah. Mudadii Maxkamadu ku socotay wax caddeyn ah oo sheegaysa innuu Bashiir ka tirsana Ururka Jabhada Ogadeniya lama keenin cadeymo la’aan ayaana lagu xukumay xabsi daayima.
Kiiskiisa waxa si xooggan uga howlgalay Masuul ka tirsan Baarlamaanka Wadanka Canada John Baird oo hadda noqday Wasiirka Arimaha dibada ee Canada. Wargeyska ayaa sheegay in iskudaygaas uusan aheyn tallaabo xoog badan oo lagu soo daayo Makhtal, waxaana hadda loo baahanyahay in Ra’isalwasaaraha Wadanak Canada uu laftigiisu ka qeyb qaato sii deynta Bashiir Makhtal. Waa innuu u sheega Raisal wasaaruhu Dowlada Ethiopia inaysan Canada wali illaawin Bashiir Makhtal oo ay ku daba jiraan, Sidoo kale inaysan indhaha ka xidhanayn gumaadka iyo Arrimaha la xidhiidha Xuquuql Insaanka ee ay Dowlada Ethiopia ku kacdo.
Maanta oo ah Jimce waxaa wadanka Canada isugu soo baxay Banaanbax xoogan oo lagu doonayo in Dowlada Canada xoog lagu saaro inay dar dar galiso soo deynta bashiir Makhtal. Loyarka Bashiir Makhtal ayaa diyaariyay “Pitition” warqado la saxeexayo loona gudbiyay Maxkamada Wadanka Canada, Midaas oo uu kaga codsanayo in wadanka Canada ay joojiyaan mucawamada ay Ethiopia siiso. Codsigaas oo ah mid suurtogal ah waayo Dowlada Canada waxa ay siisa Ethiopia deeq dhan 170 Million oo Dollar Sanad kasta. Waxaana lasoo cadeeyay oo hayadaha Dowliga ah iyo kuwa xuquuqul insaankuba soo cadeyeen in Deeqda lasiiyo Ethiopia ay ku gummaado shacabka Ethiopia. Maahan inaan leenahay haddii Ethiopia ay Wadanka Canada ceebaysay oo xidhayga Bashiir Markhtal fadeexad innoogu soo jiiday aan kaga aar goosano Kaalmada aan siino oo ha loo diido shacabka Ethiopia ee baahidu hayso in la kaalmeeyo. Shacabkaas waxaa loo kaalmeyn kara nidaamyo kale balse waa in taliska Ethiopia kaalmo lasiin ka timada wadanka Canada.
Kiiska Bashiir Markhtal ayaa ah kiis xoog badan oo Haayado badan oo Canadian ah ka howlgaleen. Waxaana ka mid ah Hayadaha Sida xoogan u wada kiiska Bashiir Hayada Amnesty International oo soo saartay Bog Internet ah oo ay kaga codsanayso shacabweynaha caalamka iyo Ree Canada inay ku tageraan. Waxa kale oo ay ka diyariyeen Filim abaabul ah oo ay kaga xog waramayaan kiiska Bashiir. Filimkaas waxa ay kula hadlayaan raisal Wasaraha Canada oo ay waraaqana u direen iyaga oo u sheegaya innu si toos ah usoo galo kiiskan oo ah mid fadeexad ku ah wadanka Canada.